Namathisela ispredishithi ku-AutoCAD, evuselelwe ngokuzenzakalelayo
Nakuba singase sifinyelele eqophelweni, okubonisa ukuthi Umngenisi Office iyithuluzi kungahlanganiswa-spreadsheet ifayela Excel noma iZwi, futhi olusha ngamandla njengoba ifayela lokuqala beshintsha, umlando Brendan Haggerty akhawunti njengoba indlela yami ...
DWG IHhovisi ebulalayo
I-Webinar: Izinto ze-5 ongazenza kangcono nge-CAD Software
Ake ucabange nje usubona iqoqo 45 flat kanye namabhokisi noma amamojuli Isakhiwo ethwele ulwazi oluphathelene ne itafula-Microsoft Office, ezifana inombolo ishidi ngubani sivunyiwe, ukwamukelwa usuku, njll Futhi udinga ukusebenzisa ushintsho kuzo zonke lezo zindiza ngaphandle kokuba uvule ngamunye, nje ushintshe idatha ku ...
AutoCAD 2016. Ukuphela amalayisense ephakade.
Njengomkhuba wemvelo walesi simiso somhlaba wonke, ohlangene nokuziphendulela okungenakulinganiswa, isofthiwe yeka ukuba umkhiqizo webhokisi futhi iba isevisi. I-AutoDesk ayiyona into esiyibonayo kakade nge-Adobe, Bentley Systems, Corel, ukubiza amagama ambalwa. I-AutoDesk isimemezele ukuthi kulo nyaka i-2015 izoba ngowokugcina ...
I-AutoCAD 2015 DWG
Ukwethulwa kwe-Spatial Manager ye-BricsCAD
Siyajabula ukuphawula ukuthi inguqulo yokuqala ye-Spatial Manager ye-BricsCAD ithunyelwe, ngakho-ke abasebenzisi manje bangasebenzisa imikhuba ye-GIS kwi-software ephansi ye-CAD software.
I-AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, kokuqala
Umphathi Spatial: Phatha idatha ngekwendzawo kahle, ngisho kusukela AutoCAD
Umphathi we-Spatial isicelo sokulawulwa kwemininingwane yendawo, esebenza ngokuzimela. Ine-plugin enikeza amandla we-geospatial ku-AutoCAD.
I-AutoCAD 2015 I-AutoCAD Imephu DGN DWG KML umbono wami wokuqala QGIS shp
I-AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS
I-Clouds Clouds nokuvumelanisa ne-Google Amamephu - 5 Yini okusha ku-Microstation V8i
Ukukwazi ukusebenzisana ne-Google Amamephu ne-Google Earth nokusingatha idatha kusuka kubaniklikhi kukhona okulindelekile okuphuthumayo kwanoma yiluphi uhlelo lwe-GIS - CAD. Kulezi zici akukho muntu ongabaza ukuthi isofthiwe yamahhala iye yahamba ngejubane elikhulu kunesofthiwe yokuthengisa. Okwamanje ngibukeza isibuyekezo sesibili se ...
Vumelanisa i-Microstation ne-Google Earth
I-Google Earth ibe ithuluzi elingenakugwemeka ezinkambisweni zethu zamanje ze-cartographic. Nakuba kunemikhawulo yayo futhi izithelo zokunethezeka nsuku zonke eziningi zihlanekezwa eziningi, sinawo leli thuluzi ukuthi i-geolocation nokuhamba kumamephu kuyathandwa kakhulu namuhla ... ngakho-ke sinalo ...
cadastre, -Google Earth / Amamephu, Microstation-Bentley
Umguquleli wamahhala we-inthanethi we-GIS - CAD nedatha ye-Raster
MyGeodata Converter kuyinto isevisi ye-Inthanethi obusiza ukuguquka idatha phakathi ngetakhiwo letehlukene. Okwamanje isevisi ibona 22 okokufaka Vector ifomethi: ESRI Shapefile Arc / Info Binary Coverage Arc / Info .E00 (ASCII) Microstation DGN Coverage (7 Inguqulo) MapInfo Ifayela ehlukaniswe ukhefana Value (.csv) GML GPX KML GeoJSON UK .NTF SDTS Census ...
Isifanekiso ukudala ifayela DXF kusuka Excel uhlu amaphuzu
Juan Manuel Anguita muva ezangehlela inguqulo entsha yalolu hlelo lokusebenza babekhuthaze ngaphambili, kodwa ngaleso sikhathi ayebashiyile ezinye izinkinga inguqulo entsha yama-Excel. Ukusetshenziswa kwalo kulula, kodwa kusebenza kakhulu. Kufanele ufake inombolo yephuzu, xhumanisa x, y, z; Ngibeke ...
I-AutoCAD-AutoDesk, Ukulanda, topografia
Ngokuvamile, lapho besithumela ifayela le-dwg ngokuvamile kuyinkinga ngenxa yenguqulo abayilondoloze ngayo. Nazi ezinye izindlela zokuxazulula le nkinga: Iyiphi inguqulo ye-dwg Lokhu akunakwenzeka ukukhomba, ngoba ifayela lilula nje .dwg noma .dxf kodwa alingaziwa kuze kube yilapho sizama ukuyivula ...
Yini okusha ku-AutoCAD, ArcGIS Global semephu
ArcGIS for AutoCAD plugin ye ESRI ukhiphe ithuluzi ukubonisa idatha kusuka ArcGIS kusukela AutoCAD, okuyinto buba njengenkungu ithebhu entsha ku-Ribbon bese akudingeki unelayisensi noma uhlelo olufakwe ArcGIS. Imisebenzi ne AutoCAD izinguqulo ukuze AutoCAD 2010 2012 baye asho lutho ngalokho AutoCAD ...
ArcGIS-ESRI, I-AutoCAD-AutoDesk, Innovations
Guqula ifayela le-DGN kusuka ku-ED50 kuya ku-ETRS89
Ngokuvamile abasebenzisi be-GIS bahlangabezana nenselele yokuguqula idatha ye-CAD nezinhlelo zokubhekisela. Sisho inselelo ngoba, ezimweni eziningi, lolu shintsho ludinga umsebenzi osivumelayo ukuthi sigcine ekugcineni silondoloze ulwazi oluningi ngangokunokwenzeka kusuka kwedatha yasekuqaleni. Kuyinto ehlekisayo, ukuthi le nqubo ifika ne-Microstation, kodwa iphephile kulabo aba ...
I-AutoCAD 3D emnyango wakho, nge $ 34.99
Kuyinto Inmediatas Yiqiniso iziqondiso, manje ubani ongathenga futhi wamukele emnyango endlini ngentengo US $ 34.99. Umkhiqizo kuhlanganisa: Yebo Igcwele AutoCAD 2D futhi 3D ngevidiyo 477 nombuzo lula isiphequluli izindikimba Wonke amafayela isampula DWG 17,000 Yiqiniso ...
Funda i-AutoCAD Ukubuka
Namuhla kukhona ngezifundo khulula AutoCAD ku-intanethi, nale singazi uhlose okubili umzamo futhi ukuhlangabezana nezinye, kodwa kunalokho umphelelisi umnikelo kuveza umgoqo phakathi Yiqiniso echaza yonke imiyalo kanye ngokoqobo umsebenzisi ngokwazi kanye i-commandos azi ukuthi ungaqala kuphi ...
I-AutoCAD-AutoDesk, Ukufundisa CAD / GIS, Ividiyo
2 Developments endaweni geospatial ukuthi ngeke zinganakwa
Unyaka sekuqalile ngamagama ashubile izinkampani abazinikezele endaweni ukuqeqeshwa, sithatha lesi sihloko ukukhuthaza abanye emisha okukhona kulesi sihloko, futhi ngenhlanhla ukunikeza embili kumkhiqizo, ogama umugqa siye sikhulume ngokusuka ngonyaka odlule okuyinto ngokwembono yethu eyingqayizivele ...
Ukufundisa CAD / GIS, Geospatial - GIS, Innovations
Indlela yokudala i-block ku-Microstation (Cell)
Ku-Microstation amabhlokhi abizwa ngokuthi amangqamuzana (amangqamuzana) nakuba ngezinye izimo ngizwile ukuthi nawo abizwa ngokuthi amangqamuzana. Kulesi sihloko sizobona ukuthi singayenza kanjani kanye nelogi ezenza zihluke kwi-Block AutoCAD. I-1 Ukusebenzisa amaseli Ngokungafani ne-SIG, lapho ukufanekisela khona kushintshe kusuka ...
I-AutoCAD-AutoDesk, cadastre, Microstation-Bentley